Anyị na-arụ ọrụ na iko ụlọ ọrụ kemgbe 2006
Nkwado Email info@yongyuglass.com
Gilasi profaịlụ LABER® U
Sistemụ iko iko dị elu
Iron iron pere mpe iko iko system
Mpempe profaịlụ nke Tinted / Frosted / dị ala
Ihu mgbidi nke facade / mkpuchi
Jumbo / iko karịrị akarị
Dupont SGP gbara akwụkwọ
Otu iko nchekwa
Otu iko mebiri emebi na nke iko
Obere otu iko nke E-pej
Ogwe ụgbọ okporo ígwè nchekwa & ogige
Sistemụ iko iko Ice
Safety gila ugboala / Glass fences
Nkebi iko nkebi
Ihu igwe nchekwa nchekwa ụlọ
Iko Smart / PDLC iko
Iko dị ọcha / dị ala
Ikike dị ọcha nke jụrụ / jụrụ oyi
Mgbapụ Glass & Ogwe
Glass na-achapu agba nke Ihe Nkpuchi
Jumbo / Glass nchekwa nchekwa
Elu Glass Profaili Gilasi / U Gi Gi Egwu Profaili Ulo Elu
Glass Profaili Gilasi / Igwe Ọkụ Iko Gi Ike ...
Mgbapụ Glass Rooms / iko Pool Fences
Ihe omuma nke di nkpa debe ihe nlele na ebe ndozi gi doziputaghi ma mechiekwa ya n’usoro gilasi. Ngwongwo ụgbọ mmiri zuru oke iko / ebe a na-egwu mmiri ka ihu igwe na-agba ọkụ, n'ime ma ọ bụ n'èzí, ịwụnye usoro mkpọchi windo bụ ụzọ dị mma iji nweta nlebara anya ma weta ọdụ ụgbọ elu / ọdọ fences echiche na ndụ. Njirimara 1) High Aesthetic Appeal ይግባ Glass trainings na-enye nlele anya dị ugbu a ma na-akpọ opi ọ bụla ọzọ usoro usoro eji eme ihe taa. N'ihi na ọtụtụ ndị, iko ite handrails bụ consi ...
Grik Profaili & Ceramic Frit & Frosted-Low-E U Profaili Glass / U Channel Gilasi
Iko profaịlụ Tinted Ufile gi bu iko nwere agba nke na-ebelata ma ihe ngosi ma n’igbu. Ikike nke etere mmanụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile chọrọ ọgwụgwọ okpomọkụ iji belata nrụgide ọkụ na nkwụsịtụ nke ọkụ ma na-achọ ịmaliteghachi okpomọkụ a na-etinye. Ngwa ahịa iko ube anyị nke UPL na-abịa n'ọtụtụ nchara ma na-edozi ya site na mgbasa ozi ọkụ. A na-atụ aro ka ị tụọ nsị maka iko maka ezigbo ihe nnọchianya agba. A na-awụnye frits agba agba agba na ogo 650 Celsius na b ...
Ihe omuma nke eji eme ya bu ihe eji eme ya dika akwa di elu nke ma obu akwa ozo, nke ejikọtara ya na polyvinyl butyral siri ike (PVB) n’okpuru okpomoku na nrụgide wee wepụta ikuku ， wee tinye ya n’elu -nwepu uzuoku ikuku na-eji ohere di elu na ikike ime ihe ka agbaze mmiri obere ihe foduru n’ime akwukwo ipu ahihia. size ： 3000mm × 1300mm Currated gilasi Currated agba lami ...
Ihu igwe nchekwa ụlọ
Ihe omuma nke di omimi, gilaita nke edoziri edo edo: Gwaa nzuzo gi ka oge di ugbu a, ihe o ga ewe bu ibu nke ngbanwe ime ka uzo gi saa aru. Ejikọtara teknụzụ amị amị n’ime ngwaahịa anyị iji nyere gị aka ịgbanwe ọdịdị ha na-achọ. Ma ịchọrọ izopu n'anya anya na-achọ ihe ma ọ bụ mee ka ọkụ bata karịa, naanị ịchọrọ pịa bọtịnụ ahụ. Iji enyo anyị ji eme ihe maka mgbidi mmiri na ibo ụzọ, a na-echekwa nzuzo gị mgbe niile! You na-achọ iko iji mejupụta ...
Glass doro anya / nke dị ala maka ime ụlọ ịsa ahụ
Ihe omuma nke di nkpa Ka anyi che ya iru, uzo nke ebe a na-asa aru abughi nani uzo nke ebe anwo anwu, o bu ihe eji edo edo edo edo edo edo edoro anya ihe ichoro ma hu ya. Ọ bụ otu ihe kachasị dị na ụlọ ịsa ahụ gị na ihe ahụ na-adọta uche kachasị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ọ ga-arụkwa ọrụ nke ọma. (Anyị ga-ekwu maka nke ahụ na nkeji.) N'ebe a Yongyu Glass, anyị maara ụdị mmetụta mmachi ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ mkpọchi tub nwere ike ịme. Anyị makwaara na ịhọrọ ụdị kwesịrị ekwesị, ụdị ederede, na ...
Iko iko (iko akara iko)
Gilasi Smart, nke a na-akpọkwa iko njikwa ọkụ, iko switchable ma ọ bụ iko nzuzo, na-enyere aka ịkọwapụta ihe owuwu ụlọ, ụgbọ ala, n'ime ụlọ, na ụlọ ọrụ mmepụta ngwaahịa.
Iwu A Na-ahụkarị: Usoro n'usoro
Keywords: Iwu ọ bụla
Oge Mbuga: izu abụọ
Iko Smart, a na-akpọkwa iko Gbanyụ swịbleble, bụ ụdị edozi a. E nwere ụdị iko abụọ dị mma, nke elektriki na-achịkwa, ọzọ na-achịkwa anyanwụ.
Otu iko profaịlụ U gi bu ihe omuma ma obu iko ola U si na Austria sitere. E mepụtara ya ihe karịrị afọ 35 na Germany. Dị ka otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị nke a na-eji rụọ nnukwu ụlọ, a na-etinye iko profaịlụ U profaịlụ dị ukwuu na Europe na America. Ejiri ngwa maka iko profaịlụ U na China sitere na 1990s. Ugbu a, ọtụtụ mpaghara na China na-eji ya maka njiri mara atụmatụ mba ụwa. Iko U profaili bụ otu ụdị iko iko. Ọ bụ ọganihu nke izobe na t ...
Glass Profaili Gilasi / Igwe Ọdụdọ Ike Glass
Ihe omuma di nkenke pere mpe nke ihe eji eme ka iko iko ihe (UBIPV) jikota uru nke U profaịlụ ulo iko na ike nke igwe iji mee ka okirikiri kpuchie nchebe na ibelata ike na nbelata ikuku. Enwere ike ijikọ UBIPV na obodo iji mee ka fotovoltaic bụrụ akụkụ nke ndụ mmadụ. Ọ bụghị naanị na ọ bụ ihe eji arụ ụlọ, kama ọ nwekwara ike nweta ebumnuche ịchekwa ume na ike ichepụta ike, ọ nwekwara ike jikọtara ya na…
Sistemu Egwuregwu Ice Rink
Ihe omuma ihe nkpuchi Yongyu Glass, onye na-ere ahia nke US Ice Rink Association, ebupula SGCC nnabata 1/2 ”na 5/8” ngwaahịa iko mmanya gbanwere na ụlọ ọrụ ice ice na USA ebe ọ bụ na 2009. Anyị na-ebupụ ngwaahịa dị elu na ọnụahịa dị ọnụ ala. na-echebara ndị ahịa anyị ngwaahịa iko ma kesaa uru ahịa a. Uru ndị ọzọ A na-eji usoro iko ice rink ice eme ihe iji chebe ndị na-ege ntị n'azụ ya. Usoro iko ice rinkas tempoil na-arụ ọtụtụ ọrụ, gụnyere: 1) Ikpuchido ...
Nkebi Glass Partition
Ihe omuma nke isi Edebere gilasi nkebi iko a ka eji enyo gilasi / enyo enyo / IGU panel mee ya, ogha n’iru gi nwere ike ibu 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. E nwere ọtụtụ iko ndị ọzọ dị iche iche na-ejikarị nkebi, maka nkebi ugere nke ikuku, ihu akwụkwọ silk na-ewe iwe, nkebi iko gradient, nkebi iko gafere, nkebi iko. A na-eji nkebi iko mee ihe n'ọfịs, ụlọ na azụmaahịa.10mm doro anya nkebi iko bụ 5 ugboro strok ...
Iko ihe nkpuchi Yongyu Glass na-aza ihe ịma aka nke ndị na-ahụ maka ihe owuwu taa na-eweta JUMBO / OVER-SIZED monolithic temolithic temped, laminated, glass insulated (dual & triple glazed) na obere mkpuchi e-glassment to 15 metres (dabere na iko iko). Ma mkpa gị dị maka oru ngo a kapịrị ọnụ, iko ma ọ bụ iko buru ibu, anyị na-enye nnyefe ụwa niile na ọnụahịa asọmpi dị egwu. Nkọwa nchekwa nchekwa Jumbo / nke dị mkpa 1) Achịcha dị jụụ na-acha ọcha / ogwe osisi dị ọcha ...
Ọhụụ anyị bụ ịkọrọ ndị ahịa ụlọ ọrụ iko ihe owuwu China, inye ndị ahịa ihe ngwọta dị ọnụ ala, na iji soro ndị ahịa nwee mmeri mmeri.
Otutu nkeji iko temprechọ dị mita 12
Otu iko profaịlụ U maka nkuzi ọpụpụ pro ...
Ọmụmụ okwu: Gbanyụọ obere mmiri U profaịlụ g ...
SGP nwa oge laminated iko, odo ...
Ngwunye ahia nke U profaịlụ-LABER U p…